Autograph | DilipKarki | There isastar in everyone. | Suvadin !
Email : dilipkarki98@gmail.com
Published Post By DilipKarki
रसुवा पहिरोमा ज्यान गुमाउने दुबैजनाको सनाखत, सात घाइते
रसुवा । मानसरोवर गएर फर्किएका तीर्थयात्री चढेको जीप पहिरोमा पुरिँदा रसुवामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेमा सोलुखुम्बु जिल्लाका सल्लेरी नगरपालिकाका ४७ वर्षीय वाङ्छु शेर्पा र लिखुपिके गाउँपालिका–१ का ४० वर्षीय दावा शेर्पा रहेका छन् । अन्य ७ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा...
प्रधानमन्त्रीको मुटुको चालमा गडबडी, 'राजनीतिक तनावले समस्या'
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.अरुण सायमीले प्रधानमन्त्रीको मुटुको चाल र सुगरमा गडबडी देखिएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको मुटुको चालमा केही तलमाथि र सुगरमा गडबडी देखिएपछि केही दिन आराम गर्न सल्लाह दिइएको छ,’ उ...
ट्रम्पको निशानामा डेमोक्र्याटिक सांसद, फेरि गरे रंगभेदी टिप्पणी
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः रंगभेदी ट्वीटका कारण विवादमा छन् । दुई हप्ताअघि ट्रम्पले कंग्रेसमा रहेका चार डेमोक्र्याटिक महिला नेतृलाई लक्षित गरेर रंगभेदी ट्वीट गरेका थिए । उनले फेरि अफ्रिकन मुलका डेकोक्र्याटिक नेतामाथि रंगभेदी टिप्पणी गरेका छन् । ट्रम्पले कंग्रेसमा डेमोक्र्याट...
मस्कोमा स्वतन्त्र निर्वाचनको माग गर्ने ५०० प्रदर्शनकारी पक्राउ
एजेन्सी । मस्को- स्वच्छ तथा स्वतन्त्र निर्वाचनको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न शनिबार भेला भएका ५६१ जनालाई रूसी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको आन्दोलन अनुगमनकारी संगठन ओभिडी इन्फोले जनाएको छ । ओभिडी इन्फो नामक संस्थाले बताए अनुसार शनिबारको प्रदर्शनमा प्रहरीको व्यापक धरपकडका वाबजुद पनि कम्त...
लामखुट्टेले कस्ता मानिसलाई बढी टोक्छ?
काठमाडौं । तपाईंको रक्त समूह ओ हुनपर्छः सन् २००४ मा जर्नल अफ मेडिकल इन्टोमोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार ओ ग्रुप समूहका मानिसले अन्य रक्त समूह (ए, बी र एबी) को तुलनामा बढी लामखुट्टे आकर्षित गर्छन्। सो अध्ययन अनुसार ओ पछि लामखुट्टेका लागि क्रमशः रक्त समूह ए, बी र अन्त्यमा एबी मन पर्छ। तसर...
''लोकसेवा पास भएर के गर्नुहुन्छ, फस्टायो भनसुन उद्योग !''
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा ‘भनसुन उद्योग’ सुरु भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेको ‘मान्छेका कथाहरु’ कथा संग्रह लोर्कापण कार्यक्रमा सभापति देउवाले नेपालमा सबै भन्दा ठ...
रसुवामा पहिरो खस्दा सुमो गाडी पुरियो : दुई जनाको मृत्यु, ८ जना घाइत
काठमाडौं । रसुवामा डाँडाबाट सडकमा खसेको ढुंगे पहिरोमा परेर एक सुमो गाडी क्षतिग्रस्त भएको छ । घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन् । ८ मध्ये २ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक भागेन्द्र पुरुष ढकालले जानकारी दिए । गोसाइकुण्ड गाउँपालिक...
कुवेतविरुद्ध नेपालको सहज जित
काठमाडौं । कप्तान पारस खड्काको अर्धशतकीय पारीको मद्दतमा नेपालले आईसीसी टि–ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलको तेस्रो खेलमा कुवेतविरुद्ध सहज जित निकालेको छ । इन्डियन एसोसियसन क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले कुवेतलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । कुवेतले दिएको १४२ रनको लक्ष्...
यती एयरलाइन्सले पोखराबाटै दैनिक ‘माउन्टेन फ्लाइट’ गर्ने
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले आफ्नो ३० सिट क्षमतायुक्त ‘जेटस्ट्रिम–४१’ विमानमार्फत पोखराबाट भैरहवा, भरतपुर र नेपालगञ्ज (चार्टरमा मात्र) का लागि उडान सेवा सुरु गर्ने भएको छ । साथै, यती एयरलाइन्सले पोखराबाटै दैनिक माउन्टेन फ्लाइट, ‘अन्नपूर्ण एक्सप्रेस’ समेत थाल्ने भएको छ ।&n...
स्कुले विद्यार्थीका लागि आयो स्मार्टर मोबाइल एप
काठमाडौं । म्‍याक्स कनेक्टले स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘स्मार्टर’ नामको मोबाइल एप सार्वजनकि गरेको छ। शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्‍मेलन गरी गरे म्‍याक्स कनेक्टले कक्षा ४ देखि ९ सम्‍मका विद्यार्थीलाइ लक्षित गरी स्मार्टर एप ल्‍याएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी...
‘वर्षा कम हुँदै तर पहाडमा सतर्कता जरुरी’
काठमाडौं । आज (शनिबार) पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज विशेषगरी मध्य र पश्चिमका पहाडी भूभागमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिए। तर त्यसो भनेर पूर्वमा पानी नै...
एसिया छनौट : नेपाललाई कुवेतको १४२ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । आइसीसी टि २० विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटको तेस्रो खेलमा नेपालले कुवेतबाट १ सय ४२ रनको मध्यम लक्ष्य पाएको छ। सिंगापुरको इन्डियन एशोसियसन ग्राउण्डमा जारी खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको सिंगापुरले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १ सय ४१ रन बनायो। उसका मोहम्मद कासिफले आक्...
Published Events By DilipKarki
Published Infos By DilipKarki
Published Polls By DilipKarki